Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): နာမည်ကျော် Blood Diamond နောက်ဆက်တွဲ ဇတ်ကား ကချင်စစ်ပွဲ အခြေခံ၍ရိုက်မည်
at 3/18/2013 06:25:00 PM
Kachin News's photo. နာမည်ကျော် Blood Diamond နောက်ဆက်တွဲ ဇတ်ကား ကချင်စစ်ပွဲ အခြေခံ၍ရိုက်မည် ၁၈.၃.၂၀၁၃ တနင်္ဂလာနေ့ သွေးစွန်းတဲ့ စိန်များ Blood Diamond ဇတ်ကား ၏ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် ကချင် ကျောက်စိမ်းကို အခြေပြု၍ ဟောလီးဝုဒ်မှ ဇတ်
Kachin News's photo.
သွေးစွန်းတဲ့ စိန်များ Blood Diamond ဇတ်ကား ၏ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် ကချင် ကျောက်စိမ်းကို အခြေပြု၍ ဟောလီးဝုဒ်မှ ဇတ်ကားရိုက်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကချင်အမျိုးသား လွတ်လပ်ရေး (KIO) ထိန်းချုပ်ရာဒေသများဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာနှင့် မိုင်ဂျာယန်သို့ ဟောလီးဝုဒ်တွင် နာမည်ရှိတဲ့ ဇတ်ညွှန်းရေး
ဟာ ကမ္ဘာကျော် တိုင်တန်းနစ် မင်းသား လီယိုနာဒို အဓိကပါဝင် ထားတဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံတွေရှိ သယံဇာတပေါများပြီး ပဋိပက္ခ ပေါများတဲ့ နိုင်ငံ
တွေမှာ သံယံဇာတနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ဆက်စပ်ပုံအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မ
မှန်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ နာမည်ကျော် ဇတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
အခု ကချင်ဒေသ တကျော့ပြန် ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရိုက် ကူးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရုိုက်ကူးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ရမ်ဘို ဇတ်ကား အပြီး ပထမဆုံး ဇတ်ကားဖြစ်ပါမည်။ ကချင်လူငယ် အချို့ က ဇတ်ကားအမည် မည်သုို့ ဖြစ်မည်ကို လောင်းကြေးထပ်နေကြကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကားရိုက်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကချင်အမျိုးသား လွတ်လပ်ရေး (KIO) ထိန်းချုပ်ရာဒေသများဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာနှင့် မိုင်ဂျာယန်သို့ ဟောလီးဝုဒ်တွင် နာမည်ရှိတဲ့ ဇတ်ညွှန်းရေး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ လာရောက်သွားကြောင်း ဒေသခံများက N-Gun Ja Wa ကို သတင်းပေးပို့ လာပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် က ရုိုက်ကူးထုတ်ဝေခဲ့သည့် Blood Diamond ဇတ်ကား ဟာ ကမ္ဘာကျော် တိုင်တန်းနစ် မင်းသား လီယိုနာဒို အဓိကပါဝင် ထားတဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံတွေရှိ သယံဇာတပေါများပြီး ပဋိပက္ခ ပေါများတဲ့ နိုင်ငံ တွေမှာ သံယံဇာတနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ဆက်စပ်ပုံအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မ မှန်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ နာမည်ကျော် ဇတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကချင်ဒေသ တကျော့ပြန် ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရိုက် ကူးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရုိုက်ကူးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ရမ်ဘို ဇတ်ကား အပြီး ပထမဆုံး ဇတ်ကားဖြစ်ပါမည်။ ကချင်လူငယ် အချို့ က ဇတ်ကားအမည် မည်သုို့ ဖြစ်မည်ကို လောင်းကြေးထပ်နေကြကြောင်းလည်း သိရသည်။ N-GUN JA WA နာမည်ကျော် Blood Diamond နောက်ဆက်တွဲ ဇတ်ကား ကချင်စစ်ပွဲ အခြေခံ၍ရိုက်မည် ၁၈.၃.၂၀၁၃ တနင်္ဂလာနေ့ သွေးစွန်းတဲ့ စိန်များ Blood Diamond ဇတ်ကား ၏ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် ကချင် ကျောက်စိမ်းကို အခြေပြု၍ ဟောလီးဝုဒ်မှ ဇတ်ကားရိုက်ဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ကချင်အမျိုးသား လွတ်လပ်ရေး (KIO) ထိန်းချုပ်ရာဒေသများဖြစ်တဲ့ လိုင်ဇာနှင့် မိုင်ဂျာယန်သို့ ဟောလီးဝုဒ်တွင် နာမည်ရှိတဲ့ ဇတ်ညွှန်းရေး အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ လာရောက်သွားကြောင်း ဒေသခံများက N-Gun Ja Wa ကို သတင်းပေးပို့ လာပါတယ်။ ၂ဝဝ၆ ခုနှစ် က ရုိုက်ကူးထုတ်ဝေခဲ့သည့် Blood Diamond ဇတ်ကား ဟာ ကမ္ဘာကျော် တိုင်တန်းနစ် မင်းသား လီယိုနာဒို အဓိကပါဝင် ထားတဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံတွေရှိ သယံဇာတပေါများပြီး ပဋိပက္ခ ပေါများတဲ့ နိုင်ငံ တွေမှာ သံယံဇာတနှင့် ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ဆက်စပ်ပုံအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မ မှန်ကို အခြေပြုပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ နာမည်ကျော် ဇတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကချင်ဒေသ တကျော့ပြန် ပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရိုက် ကူးဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်တွင်းစစ်အကြောင်း ရုိုက်ကူးထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ရမ်ဘို ဇတ်ကား အပြီး ပထမဆုံး ဇတ်ကားဖြစ်ပါမည်။ ကချင်လူငယ် အချို့ က ဇတ်ကားအမည် မည်သုို့ ဖြစ်မည်ကို လောင်းကြေးထပ်နေကြကြောင်းလည်း သိရသည်။ N-GUN JA WA